Where ( eg. Alone, Hlaing,Yankin...) East Dagon Ahlone Bahan Botahtaung Dagon Dagon Seikkan Dala Dawbon East Dagon Hlaing Hlaing Thar Yar Insein Kamayut Kyauktada Kyeemyin Daing Lanmadaw Latha Mayangone Mingalar Taung Nyunt Mingalardon North Dagon North Okkalapa Pabedan Pazundaung Sanchaung Seik Gyi Kha Naungto Seik Kan Shwe Pyi Thar South Dagon South Okkalapa Tarmwe Thaketa Than Lyin Thingangyun Yankin
Welcome to East Dagon
East Dagon Township (also East Dagon Myothit) is located in the easternmost part of Yangon, Myanmar. The township comprises 28 wards and3village tracts. It shares borders with Hlegu Township in the north, North Dagon Township in the west, and South Dagon Township in the south and west. One of the new satellite towns founded in 1989 by the military government that came to power in 1988, East Dagon is still largely undeveloped and lacks basic municipal services. The township has 22 primary schools, three middle schools and five high schools.
Over 2,400 businesses situated in this area, around 36,500 employees working at these respective businesses, total area 91.0 sq km – Density: 1,819/sq km, Total Population 165,628 people living in this township. Postal Code – 11451
The Ngamoyeik creek cuts through East Dagon Township. The Togyaunggalay Railway Station isastop on the Yangon Circular Railway, and Myanmar Railways' Yangon-Bago line. Several bus lines connect East Dagon to downtown and other parts of the city.
ဒဂုံမြို့သစ်(အရှေ့ပိုင်း)မြို့နယ် သည် ၁၉၉၄ ခုနှစ် သြဂုတ်လတွင် ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)မြို့နယ်မှ ခွဲထွက်၍ မြို့နယ်တစ်ခုအဖြစ် စတင်ရပ်တည်ခဲ့သည်။ အကျယ်အဝန်းမှာ ၃၅ ဒသမ ၁၅ စတုရန်းမိုင် ဖြစ်သည်။ လှည်ကူးမြို့နယ်၊ ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)မြို့နယ်၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)မြို့နယ်တို့ ပတ်ပတ်လည်တွင် ဝန်းရံထားသည်။ မြို့နယ်အတွင်း တောင်မှ မြောက်သို့ ငမိုးရိပ်ချောင်း ဖြတ်သန်းစီးဆင်းလျက်ရှိရာ ဒီရေအတက်အကျကြောင့် ရေနက်ကွင်းများ တခါတရံ၌ ရေလွှမ်းမိုးခြင်း ခံရသည်။ ငမိုးရိပ်ချောင်းဘေးရှိ ရပ်ကွက်များသည် မုတ်သုန်ရာသီတွင် ရေကြီးခြင်း၊ လေပြင်းတိုက်ခြင်းများ ကြုံရလေ့ရှိသည်။
ဒဂုံမြို့သစ်(အရှေ့ပိုင်း)မြို့နယ်ကို ရပ်ကွက်ပေါင်း (၆၃)ခု၊ ကျေးရွာအုပ်စု (၃)ခုတို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှ စာရင်းများအရ ၂၀၁၇ ခုနှစ် မတ်လကုန်တွင် လူနေအိမ်ခြေ (၂၈ ၇၄၀)ခု ရှိပြီး အိမ်ထောင်စု (၃၂ ၂၃၃)စု ရှိသည်။ လူဦးရေမှာ (၁၅၆ ၃၃၆)ဦး ဖြစ်သည်။
Business Collection Group (BCG) ၏ အချက်အလက်များအရ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း (၂ ၄၀၀)ကျော်ရှိပြီး လုပ်သားအင်အားစု (၃၆ ၅၀၀)ဦး လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည်။ မြို့နယ်အတွင်းမှာ နေထိုင်ကြသူတို့သည် အစိုးရဌာနများ၊ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ၊ စက်ရုံများတွင် အများဆုံး လုပ်ကိုင်ကြသည်။ စက်မှုဇုန်များမှ လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများ၊ စားသောက်ကုန်များ၊ ချုပ်ထည်အဝတ်အစားများကို အဓိကအားဖြင့် ထုတ်လုပ်တင်ပို့သည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအနေဖြင့် အမှတ်(၂)အဝေးပြေး လမ်းမကြီးဘေးတွင် တည်ရှိသည်။
ထင်ရှားသည့် စေတီပုထိုးများမှာ လေးကျွန်းစင်္ကြာ မဟာဆုတောင်းပြည့်စေတီနှင့် ဆယ်တော်မူဘုရား တို့ ဖြစ်သည်။
စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍတွင် ငမိုးရိပ်ချောင်းရေ အတွက် ငမိုးရိပ် ရေထိန်းတံခါး ရှိပြီး ဧက တစ်သောင်းကို အကျိုးပြုသည်။
စွမ်းအင်ကဏ္ဍတွင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ဓာတ်ဆီဒီဇယ်ဆီအရောင်းဆိုင် တစ်ဆိုင်ရှိပြီး KZH မှ လုပ်ကိုင်သည်။ အစိုးရပိုင် မော်တော်ယာဉ်သုံး သဘာဝဓာတ်ငွေ့ အရောင်းဆိုင် (၂)ဆိုင်ရှိသည်။
စာပို့သင်္ကေတ အမှတ်မှာ ၁၁၄၅၁ ဖြစ်သည်။
ရထားလမ်းပိုင်းမှာ တိုးကြောင်ကလေးဘူတာမှ ဒဂုံတက္ကသိုလ်အထိ ၅ မိုင် ဝန်းကျင်ရှိသည်။
ဒဂုံမြို့သစ်(အရှေ့ပိုင်း)မြို့နယ်သို့ ရောက်ရှိသော ဝိုင်ဘီအက်စ် ယာဉ်လိုင်းများတွင် ၁၀၊ ၁၅ လတ်၊ ၁၅ ကြီး၊ ၂၄၊ ၂၅၊ ၂၆၊ ၂၇၊ ၂၈၊ ၂၉၊ ၃၀၊ ၆၆ စသည်တို့ ပါဝင်သည်။
ထင်ရှားသည့် တံတားများမှာ ငမိုးရိပ်(ဒဂုံအရှေ့)တံတားနှင့် ရွှေပေါကံ္ကတံတားတို့ ဖြစ်သည်။
ထင်ရှားသည့် ဈေးများမှာ စည်ပင်ပိုင်ဈေးများ ဖြစ်သည့် အမှတ် (၂)ဈေးနှင့် အမှတ် (၆)ဈေးတို့ ဖြစ်သည်။
အစိုးရပညာရေးကဏ္ဍတွင် ဒဂုံတက္ကသိုလ်၊ မူလတန်းနှင့် မူလတန်းလွန်ကျောင်း (၂၁)ခု၊ အလယ်တန်းနှင့် အလယ်တန်းကျောင်းခွဲ (၃)ခုနှင့် အထက်တန်းကျောင်းနှင့် အထက်တန်းကျောင်းခွဲ (၆)ခုတို့ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးလျက် ရှိသည်။
ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးကျောင်း (၁၀)ခု ရှိသည်။
ကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွင် စိတ်ကျန်းမာရေးဆေးရုံ၊ မြို့နယ်ပြည်သူ့ဆေးရုံ နှင့် ဦးလှထွန်းကင်ဆာဖောင်ဒေးရှင်းဆေးရုံတို့ တည်ရှိသည်။ဖျော်ဖြေရေးကဏ္ဍတွင် ရွှေရတနာ ရုပ်ရှင်ရုံ ရှိသည်။
University of Dagon
Ywar Thar Gyi Dry Port
Mental Health Hospital [Yangon]
University of Dagon Convocation Hall
East Dagon Demographic & Economic Activities
Total Population 165,628*
Percentage Of Urban Population 94.3%
Area (km2) 91.0**
Population Density (persons per km2) 1819.4 persons
Number Of wards 28
Number Of Village Tracts 3
Population In Conventional HouseHolds 155,258 146,502
Number Of Convetional Households 33,913 31,895
•In Dagon Myothit (East) Township, there are slightly more females than males with 95 males per 100 females.
•The majority of the people (94.3%) in the Township live in urban areas.
•The population density of Dagon Myothit (East) Township is 1,819 persons per square kilometre.
•There are 4.6 persons living in each household in Dagon Myothit (East) Township. This is slightly more than the Union average
Productions 162 24683
Retails 922 2290
Wholesales 153 2579
Services 1210 6412
Trading 14 563
All about East Dagon
: U Nay Kyaw
: Dr Htay Kywe
: +959976232219
: U Kyaw Kyaw Maung
: +9594210 54767
Category : Car & Truck Dealers & Importers
Address : 128, Kanaung Min Thar Gyi St., Industrial Zone,
Phones : 09-73254727, 01-3585340
Hnit Thit Oo Printing House
Category : Press & Printers [Offset]
Address : 27/A, Industrial Zone, Corner of U Hmoo St and U Tun Nyo St,
Phones : 09-766766751, 09-766766752
Category : Car Engine Oil & Lubricants
Category : Car Manufacturers
Address : 134, Tine Tar Min Gyi ST, Ward (144),
Phones : 09-5072760, 09-797222229, 09-421181784, 09-421128313